Haddii aad qabatay wax badan oo ka mid ah horumarka WordPress, waxaad ogtahay inay badanaa ka jilicsan tahay oo dhakhso badan tahay inaad ka shaqeyso desktop-kaaga ama laptop-kaaga halkii aad marwalba ka walwali lahayd isku xirnaanshaha fog. Socodsiinta adeegaha keydka macluumaadka deegaanka waxay noqon kartaa xanuun, inkasta oo ay la mid tahay sameynta MAMP ama XAMPP si aad u bilowdo adeegaha webka ee deegaanka, u dejiso luqaddaada barnaamijka, ka dibna aad ugu xirto keydka macluumaadkaaga. WordPress waa quruxsan fudud ka naqshadaha ah
In kasta oo ay jiraan tobanaan sababo oo ah in rakibiddaada WordPress ay si gaabis ah u socoto (oo ay ku jiraan qoraallo iyo mawduucyo liita oo si liidata u qoran), waxaan aaminsanahay sababta keliya ee ugu weyn ee ay dadku dhibaatooyinka u qabaan inay tahay tan shirkadda ay martigelinayaan. Baahida dheeraadka ah ee badhanka bulshada iyo isdhexgalka ayaa sii murjinaya arinta - qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa si aad ah u hooseeya sidoo kale. Dadku way ogaadaan. Ogeysiisyada dhagaystayaashaada. Mana badalayaan. Haysashada bog qaadanaya in ka badan 2 ilbidhiqsi ayaa la buuxin karaa
Waxaan Guurnay Martigaliyayaal… Waxaa Laga yaabaa Inaad Doonto Si Wanaagsan
Axad, Janaayo 31, 2016 Khamiis, May 19, 2016 Douglas Karr
Daacad baan u noqon doonaa inaan si aan caadi aheyn u niyad jabay hadda. Markii la maareeyay WordPress martigelinta suuqa iyo qaar ka mid ah asxaabteyda ayaa furay shirkadooda, ma aanan faraxsaneyn. Ka wakaalad ahaan, waan ka daalay inaan la galo arin ka dib arin la xiriirta martigaliyayaasha websaydhka oo noo gudbin doona wixii dhibaato ah ee WordPress ah. Iyadoo la adeegsanayo martigelinta WordPress, martigeliyahayagu wuxuu taageeray WordPress, wuxuu ku hagaajiyay xawaare, wuxuuna lahaa astaamo u gaar ah maaraynta dhammaan